Runyararo Kuburikidza Nekushanya Zvino - Kunyangwe Zvisiri Chete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Runyararo Kuburikidza Nekushanya Zvino - Kunyangwe Zvisiri Chete
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
15 min kuverenga
Runyararo Kuburikidza neKushanya
rakanyorwa Max Haberstroh
Runyararo runopfuura kusavapo kwehondo - hapana rugare, hapana Tourism. Ichokwadi kuti nguva yehondo ine magamba ayo akakurumbira, nepo rugare ruine 'magamba akanyarara.' Munguva dzeCOVID ndivo vanamukoti, vanachiremba, vemberi uye vanhu vebasa. Ndiyo hotera yeSME, resitorendi uye muridzi wepub, uye vashandi vanopa kurapwa uye hutano masevhisi pamwe chete nezvinobvira nemasiki uye kureba - uye nekuziva kuti kumwe kukiya-pasi kwaizogogodza bhizinesi kunze.
Apo mafashamo akauya, achiparadza minda, dzimba, zvivakwa zvavose, uye chokurarama nacho chavanhu, vazvipiri vakabva pedyo nokure vakamhanyira kubetsera nokuda kwebetsero.
Vanhu vakapa nemwoyo wose.
Munzvimbo dzakaparadzwa nemoto wesango, vadzimi vemoto vakashinga, kazhinji vakaderera zvisina tariro kusimba remadutu emoto, vairwa zvikuru masikati nousiku, kutozosvikira vapera simba.
Kamwe kamwe, kuzvikudza, hedonism uye nyaradzo zoning, neimwe nzira yakashorwa sezviratidzo zvekusazvibata, yakanzwa sekudzingwa, ichipa nzira kune chimwe chinhu kunze kwechido chekuda muvakidzani wako. Cataclysms inogadzira mitemo yavo. Nguva yerunyararo yawana magamba ayo, uye munguva dzenjodzi nenjodzi vanhu vanogona kuratidza rimwe divi ravo - zvinogona kunge zviri zvavo.
Basa racho rakaoma, zvipingamupinyi ndezvechokwadi, kuva netariro kwakakosha, zvakadaro. Chimbichimbi chirikuda kutanga - uye nekukurumidza - rubatsiro, nepo zviitiko zvinongokura zvishoma nezvishoma zvinouraya zviri kushaya ruzivo rwakakwana rwevanhu kuti riite chiito nekukurumidza. Zvinhu, zvakawanwa nhanho-nhanho, zvinotora nguva yavo kubereka michero, ukuwo mikana yega yekuti shasha 'dzipenye' yakamirira.
Kazhinji, ugamba munguva yerunyararo uye zvishoma zvekukurumidzira zvingave zvisingashamisi, asi zvisingakoshi ("heroic pacifism pasina mubvunzo inofungidzira," anodaro. Albert Einstein) Runyararo hausi munhu anozviitira; rugare mugumisiro wamabasa edu. Hazvina basa kutaura kuti izvi zvinopa dambudziko chairo kune Vafambi & Tourism vatariri senyanzvi dzekutaurirana kuita!
Sevafambi, tinobhadhara mari yezororo redu. Izvi zvinoreva kuti tinoonga kunakidzwa nemazororo edu kupfuura mari yatakabhadhara. Tinofanira kuziva nezveropafadzo yokuva vaenzi vedu. Kugarisana nevamwe chinhu chinokosha pakugara pamwe chete. Kune rumwe rutivi, kana isu - sevagamuchiri - tichinzwa kuti mutsa watinopa vashanyi vedu unotyisidzira kuguma serudzi rwekutorwa kwehasha nevatorwa, ipapo kuzvivimba kwedu munzanga kunotyorwa zvakanyanya. Kugadzira kukanganisa uye kusawirirana ndeimwe nzira yekukonzera kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
'Ziso' redu rekuziva zvakatipoteredza uye tsitsi dzevanhu dzinoda kurodzwa, kuitira kuti tizive zvakanaka kune zvose zviri zviviri zvemuviri wedu (kunze) uye zvepfungwa (mukati) 'zvakatipoteredza.' Kune rugare bedzi, kana rwakadzika midzi mukati medu timene savanhu vamwe navamwe, vanogoverana pfungwa yechiremera nomumwe nomumwe. Kufamba & Kushanya kunopa nhanho yepasirese kune yakanaka - kana yakaipa - tsika. Mumwe munhu akamboti, rakafanana neziso risingazvioni. Inogona kudzidza kusimudzira maonero ayo kune zvakaipoteredza, zvakafanana nematarenda ari kusimukira emutori wemifananidzo.
Tichitarisa nezveKushanyirwa kwekubhururuka kwepamusoro-soro kwekusimudzira kunzwisisa kwepasirese, tinogona kuona: Pakuipisisa inhema (semuenzaniso, rwendo rwunosanganisira zvese!), pazvakanakisa kufunga kweshuviro. Inodyisa ngano yakagovaniswa nevatori vechikamu kuti rusaruro rwaizonyangarika, uye inomutsa tariro yakanyarara yakagovaniswa nesu, vafambi, kuti chaizvo izvi hazvingaitike, uye isu tinokwanisa kumira nemafungiro edu akamisikidzwa. Pane kuti tinosangana nevanhu vomunharaunda yedu. Izvo zvinotarisirwa kudzika-kumusoro kunzwisiso yepasirese ishoma: zvisinei nekujoinha rwendo rwekuona nzvimbo, kunakidzwa neunyanzvi hwemuenzi wekubika kana kubhurawuza munzvimbo dzekutenga dzine mavara, vanhu vazhinji vekusangana navo pazororo vanongoitika uye vanongoitika. Dzinopera nekufamba kwenguva, sezvinongoitawo tsika dzekufamba dzimwe nguva.
Chitarisiko chekunze che'Tourism Unlimited' chabuda nekuda kwekuti maratidziro aimbove akasiyana magariro adzima kana kudzima zvachose. Nzvimbo dzemazororo dzaimbonzi ndedzega dziri kupihwa iko zvino mune chero kabhuku kana webhusaiti.
Dzimwe nzvimbo dzakapfuura neshanduko inokatyamadza, semuenzaniso Baden-Baden: Aimbozivikanwa se "guta guru rezhizha reEurope," uko vapfumi nerunako vaigadzira yavo 'Vanity Fair,' iyo spa-guta nhasi inzvimbo yekuvandudza uye. hutano kunyangwe kune vatengi vari pahutano. - Kana kuti sarudza Madeira, uko munzvimbo dzakasarudzika munzvimbo dzakapfava, nyika dzepamusoro dzakambopora: Nhasi chitsuwa ichi irwendo rwekushanya.
Chinonyanya kukosha, inyaya yeVenice: Inosiyaniswa seUN World Heritage, Venice yakapindwa kusvika nguva pfupi yadarika nevashanyi venguva pfupi kubva kune mahombe engarava-zvikepe zvinotyisidzira chimiro cheguta regungwa uye kugadzikana kwevanhu veko. Vagari venzvimbo vakatarisa rudzi urwu rwekupinda sekurwisa - kuguta ravo uye hupenyu hwavo hwemagariro.
Mamiriro ezvinhu kune dzimwe nzvimbo anotaridzika zvakafanana: Angkor, raichimbova guta rine mbiri retemberi yechiHindu-Buddhist yemadzimambo eKhmer, yakatanga kuora kubva muzana remakore rechi15 zvichienda mberi uye yakaparara. Zvinotendwa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze (!) uye hubris dzevanhu zvakaunza kuparara kweAngkor.
Muzana ramakore rechi19 chete vaongorori veFrance vakawana matongo ndokuunza Angkor masikati machena. Mukumuka kweHondo yeVietnam, Khmer Rouges yemakomunisti yakavakunda. Nhasi, maKhmer Rouges aenda, uye "mhomho dzetsoko nevashanyi" (Christopher Clark, munyori wenhau dzakaitika weAustralia) akakundazve matongo anoyevedza etemberi eAngkor Vat naAngkor Thom.
Mu'Expansion du tourisme,' Mai Anita Pleumaon veTourism Investigation & Monitoring Team (tim-tim) vanopfupisa kuti: “Tsika dzemazuva ano, dzakaiswa kunzanga dzeAsia mukukura nokukurumidza, dzinoita sedzakonzera migumisiro inoparadza zvikuru uye kunzwa kwokusagadzikana, kusava nehanya, kusagadzikana uye kusagadzikana. Maitiro ekushambadzira uye kufambiswa kwemazano matsva, mifananidzo uye ruzivo zvakasiya nzvimbo shoma kune tsika, kutaura kwetsika, hunhu hwemhuri nenharaunda. " Maitiro edu ekuenda ari kuvaka bakatwa rinocheka nekwose sezvo hunyanzvi hwaro uye maitiro anotevera maitiro ekumadokero? Pane zvakafanana here pakati pekuedza kwedu kunomanikidza 'kwekuvaka kwekuenda' uye pfungwa yepashure-Hondo yeCold-ye 'kuvaka nyika'?
Humbowo hune hutsinye hwekusapindirana kwedemocracy yekumadokero uye kuvaka nyika kunogona kupupurirwa muAfghanistan. Afghanistan, kuma1960 nema70s nzvimbo inofadza yekufambisa uye denga revakasiya kubva kuEurope, yakanga yabudirira kugadzirira nzvimbo yekukundwa kwemasimba maviri enyika: mauto eSoviet muna 1989 uye mauto eNATO akatungamirirwa neUnited States muna Nyamavhuvhu 2021. MaSoviet, Afghanistan yaingova kutamba kwemasimba, kuUS neNATO yaive nzvimbo yakaonekwa yehugandanga hwepasirese uye kuvanda kwaOsama Bin Laden, gandanga repamusoro re9/11.
Chinangwa chekupindira kwemauto eUS-NATO chaive chekupidigura hurumende yeTaliban panguva iyoyo uye kubata Bin Laden. Mamisheni ese ari maviri akazadzikiswa, asi dambudziko rine mbiri rakakwevera mubatanidzwa wekuMadokero kuti "ugare kwechinguva," kuitira kubatanidza Afghanistan sedemocracy yekuMadokero. Chinangwa ichi chakatadza zvinonyadzisa, mauto evarimi veTaliban akadzoka ndokumanikidza US neNATO kuti ibve muAfghanistan harum scarum - nevazhinji vakafa, vakakuvara kana kushungurudzika, mabhiriyoni emadhora akashandiswa, uye kusahadzika kwakakura kwasara. Vanoguma nemubvunzo usingaperi asi uchigere kupindurwa: Zvechii?
Zviyeuchidzo zvinorwadza zveHondo yeVietnam zvakatangazve. Mifananidzo yekupukunyuka kunoshamisa muherikoputa kubva padenga reSaigon muna 1975 yakaitwa muna 2021, kuenda kumifananidzo yedenga kubva kuKabul Airport, yakazara nevanhu vakapererwa, vamwe vacho vakabatirira pasi pendege uye ichidonha…
Ndiani ane mhosva? Ndiani anotora mutoro? Zvakadini nezvidzidzo zvakadzidzwa?
Vane mutoro ndeavo vose vaisagona kunzwisisa kana kuramba kugashira zvidzidzo zvavaifanira kunge vakatodzidza kare: kutanga, magariro evanhu uye mararamiro emagariro hazvigoni kutamiswa pane vamwe nechisimba - hapana uye kwete zvachose muAfghanistan; chechipiri, basa remauto nderokurwa, uye kwete kuvaka zvikoro, zvipatara, uye kuchera matsime; chechitatu, zvese zvirongwa zvemauto nezvevagari vehurumende zvinoda chiratidzo chakaomarara uye chine nguva yakatarwa, kana chinangwa chinozofanirwa kuitwa chikonzero chemunhu wese - uye kwete maitiro akanyatsotarisirwa ane magumo akazaruka uye akawanda ekunyepa kwakakwirira; hukama hwakabatana pakati pevakuru vemuno nevadyidzani vekune dzimwe nyika vane tsika yakasimba yekuenderera mberi nerusarura nehuori. Rudzi urwu rwe'zvibatanidzo zvine ngozi' zvinozotungamira mukukonana kana kurwa uye zvokonzera nyonganiso isina kupfeka pakupedzisira.
Nguva zhinji, mushure mekuzvipira kwechiuto kwemoyo miviri asi kwenguva refu, sarudzo yakanakisa yevatorwa inoratidzika kunge inosiya chiitiko - nechiitiko chinodzokororwa chekubhururuka kunonyadzisa, pane kubva zvakarongeka, asi ikozvino tine tariro nechidzidzo chikuru chakadzidzwa: kuchengeta. kunze kwenyaya dzemukati medzimwe nyika, kunyanya kana misiyano yemagariro netsika yakanyanya kuoma kuti tisiyane. Munyori wechiRungu-chiDutch Ian Buruma anoreva 'musungo wekoloni' masimba makuru anogona kuwira mazviri, ipapo uye izvozvi.
Zviri kure-kure here kushandisawo thesis ye 'colonial trap' yemasangano anobatsira ebudiriro? Rubatsiro rwekusimudzira kupikisa rwunotarisana zvakanyanya nemaitiro ekusingaperi emapurojekiti mazhinji ehunyanzvi, aine zvinangwa zvekubhururuka-bhururuka asi mhedzisiro inobatika chete. Ichokwadi kuti nyanzvi dzekune dzimwe nyika dzinogona kuita zvinobatsira kwete chete serutsigiro nevadzidzisi, asiwo sevarevereri vanovimbika pakati pemapoka emuno anokwikwidza. Kusimudzirwa kwekushanya mune zvakasiyana-siyana zvemukati uye ma paramita hapana chinhu kunze kwekusunungurwa. Maiwe, muedzo ndewechokwadi kuti munhu anonyanya kubatanidzwa munhau dzemukati menyika, uye kuenda kwenyanzvi kunogona kungofungidzira chokwadi chekuti akange ave chikamu chedambudziko, pane kugadzirisa kwayo.
Kazhinji zvinonyanya kufarirwa kutaura mazwi zvakajeka asi zvichipihwa fungidziro yekufungidzira kweiyo etymological kufanana kwe 'Tourism' uye 'hugandanga,' kutuka kunogona kuuraya: Tourism inoda rusununguko, hugandanga hunoda ruvengo. Tourism, mukutaura kwayo kwakashata, inogona kuuraya tsika yemuno zvinyoro nyoro, nepo hugandanga hunouraya nekukasira, zvese zvakanangwa uye nemazvo, pasina tsitsi, zvakadaro ne Tourism semumwe wevakatanga kubatwa.
Tourism haigone kutumbuka, uko hugandanga hunopisa, Tourism inoda rugare. Tinogona sei kutaura kuti Kufamba & Kushanya kunobatsira kugadzira nekuchengetedza runyararo? Pane akambonzwa nezve basa rakakura rakaitwa nesangano reVashanyi, rakabatana nevamwe, mukuyedza kuchengetedza, toti, Afghanistan nyika ine runyararo uye inoshivirira uye yekushanya kwekushanya, sezvayaimboita mumakore makumi matanhatu?
Mamwe makumi maviri emakore mushure mehondo, Vietnam yave nzvimbo inoyevedza yekufambisa, kunyangwe iine hutongi hwemakomunisiti munzvimbo ye capitalist (!), uye hukama hwehushamwari neUS nenyika. Nhaurirano dzezvematongerwo enyika, network yemakambani ebhizinesi, uye kushanya kwaPresident Clinton muna 2000 zvakaita kuti hukama hwehurumende nevemabhizinesi huve hwakarongeka. Kufamba & Kushanya kwaitevera, asi matanho apfuura angave aratidza kuzvipira kweUNWTO kana WTTC zvakaoma kuyeuka.
Tinogona here kutora Vietnam segwara reushingi re "normalization" yehukama neAfghanistan Emirate? Tingatarisira here kushanya kwemakomo muHindu Kush zvakare kuma2040s - neIslamist Talibans semadhiraivha ekushanyira ane hushamwari?
Anopenga zvakakwana, munhu angafunga, achidzungudza musoro - kwemakore makumi maviri mushure meHondo yeVietnam, Samuel P. Huntington akaburitsa blockbuster yake yezvematongerwo enyika 'The Clash of Civilizations.' Dzidziso yaHuntington yekuti hondo dzemunguva yemberi dzaisazoitwa pakati penyika asi tsika, zvinotungamira kunhaurirano dzakapokana - uye kutangazve kwe 'Dialogue Pakati peCivilizations,' iyo inopikisa iyo muzivi weAustria Hans Köchler akadzivirira muna 1972, mutsamba yakanyorerwa UNESCO uye. vakasiiwa mukukanganwa.
Mamiriro ezvinhu aripo haagone here kupindira kwakazvipira kweKufamba & Kushanya, nemasangano ayo makuru UNWTO neWTTC, kubatsira kuvandudza nhaurirano pakati pe 'budiriro,' kuburikidza neanologous uye digital media, zvinooneka uye nesimba, pachinzvimbo chepfungwa yekuita " Runyararo kuburikidza neKushanya - asi kwete chete?
Iyo meseji inoda kubatanidzwa kwevane pfungwa dzakafanana mukati nekunze kweKufamba & Tourism, kuti vashandure pane kufunga uye kuita. Inogona kufemerwa nemazano aLouis D'Amore ane hunyanzvi uye nechido akaziviswa uye akadzivirirwa semuvambi uye wenguva refu Mutungamiriri we '.International Institute for Runyararo kuburikidza neKushanya.
Huye, kurota ngakuve rombo reavo vane tariro uye kunyomba chombo chevasina simba - vane simba vachave neavo nyaya: Kunyange iyo Russian Bear yapora kubva kune yayo 'Afghanistan' chiitiko uye yakazvigadzirisa zvakare, iyo US Eagle uye yayo transatlantic. shiri dzinonzi hummingbird dzichiri mubishi rekunanzva maronda adzo kubva pakukundikana kwadzo. Dhiragoni yeChinese haigone asi kupinda mune zvakaipa grin pamusoro pekunyadziswa kwevakwikwidzi vepasirese. Zvinoita sekuti nyika iri kubhururuka kubva muCold War ichipinda muCold Peace. Izvi zvinoreva zvishoma kudarika kungoita zvombo chete, asi zvakaringana kuisa pangozi shanduko 'inopisa' yezvematongerwo enyika, pamwe kwete pamwe netsika dzeHuntington 'mitsara yekukanganisa,' asi ingangoita pamwe neyekare, inozivikanwa West-East divide. Zvakaoma kunzvenga pfungwa yekuti hupofu hwezvematongerwo enyika hunogona kukonzeresa "maitiro, anobva mukudzoka kwezviitiko - asi kazhinji," sekutaura kwakaita muzivi Leibniz. Kuparara kwakadini kwounyanzvi hwezvamatongerwe enyika kubvira pakanyangarika Iron Curtain!
Pane imwe pfungwa inoshamisa yeiyi miitiro: “Apo Munhu anopinda munyika segororo, nyika ichamumanikidza kuti arambe achirarama segororo. Iyi ndiyo mhinduro yenyika, tingati, kutsiva kwayo,” anodaro Ludwig Fusshoeller mu 'Die Dämonen kehren wieder' ('The Return of the Daemons'). Vashanyi vanoonekwa sevapanduki, vachabatwa saizvozvo, vangave vashanyi vari nyore, vebhizinesi vanosvika - kana mauto ekunze! – Tingati kudii? 'Bye-bye kugamuchira tsika' hazvizokwani.
Mumutambo waGoethe ane mukurumbira wakashata, chinangwa chechokwadi chaFaust chinotemerwa nekukunda kwake pachezvake. Zvisinei, sezvaanonzwa achifara zvikuru kuti aita basa rake rokuzvifunga, anorasikirwa nokubhejera kwake naMephisto uye anoteterera kuti: “Zvino, ndingati: ‘Chimbomirai! Wakanaka kwazvo!’”
Kana tikatarisa pasi redu nhasi, tinoziva nezve 'nyika yeFaustian' kunge yadzoka zviri pachena, uku kubwinya zvakare kwapfeka patsva kutsvinda kwegore rapfuura uye chishuwo chevaenzi nevashanyi chisingaperi, chinowedzerwa nekutukwa kunotyisa kwedenda - "Kugara kwenguva ..."
Munyori, Max Haberstroh, inhengo yekutanga ye World Tourism Network (WTN).